[OFFICIAL] dr.fone - iOS Indawo yoBuyiselo-Data: Buyisa esusiwe Lost Data / on Devices iOS
dr.fone toolkit - iOS Recovery Data
1 iPhone ne iPad software recovery data kwehlabathi.
Highest izinga recovery kolu shishino.
Buyisa iifoto, iividiyo, abafowunelwa, imiyalezo, amanqaku, zikhuni umnxeba, kwaye ngaphezulu.
Ihambisana kunye yakutshanje izixhobo iOS.
Iingcombolo ezilahlekileyo akukho lutho. Sinako kwakhona iifayile ezivela ngeziganeko ezininzi eziqhelekileyo.
Iingcombolo ezilahlekileyo emva Factory
Iingcombolo ezilahlekileyo ngenxa uhlaziyo iOS
Isixhobo kwahlala kwaye ayiphenduli
Idatha ayikho emva jailbreak okanye ROM ezidanyazayo
Isixhobo itshixiwe, andilibalanga igama
Ayikwazi ukuvumelanisa backup
Khangela & Preview ususiwe Data for Free
Unga sebenzisa oku iOS wobuyiselo data ukuvavanya zonke data izakucinywa okanye ekuphulukwana iPhone, iPad okanye iPod wakho kwebala, uze kuqala iinkcukacha for free.
Download and View iCloud Content Eyogcino for Free
Ufuna ukulayisha ukucatshulwa iCloud ifayile elilalela? Le software recovery data iOS ikuvumela ukuba wenze into simahla. Zama ukuba uze uyazi loo nto.
Funda Ifayile yakho iTunes Eyogcino for Free
Sonke siyazi ukuba Apple awuvumeli ukuba abantu bafunde umxholo iTunes yogcino ifayile, ngoxa le software recovery data iOS wenza, kwaye simahla.
1 Nqakraza ku kuqala & ushicilelo lwe data yakho
Yeyona ngaphezu isixhobo recovery data iOS. Xa ufumana idata yakho isiphumo scan, unakho ukuwufunda kuqala ngqo uze uprinte isiqulatho xa isidingo esinjalo. Yinto umsebenzi unqakrazo olunye-.
Buyisa Up to 18 File Types
Le software recovery data iOS yenza ukuba ukubuyisa data ezinjenge abafowunelwa, imiyalezo, iifoto, amanqaku, ubize imbali, izikhumbuzo, imiyalezo WhatsApp, kwaye nangakumbi, ukuya iintlobo 18 ifayile.
Emane ukufunyanwa into ofuna
Emva ukuhlolisisa iPhone, iPad okanye iPod yakho ngaphandle kwebala, okanye utsala iTunes okanye iCloud iifayile backup, unakho ukuwufunda kuqala uze ukhethe naziphi na izinto ofuna ukuba ningayihlanguli kwi khomputha yakho okanye kwi kwisixhobo sakho. Yinto ngokupheleleyo phezulu kuwe.
Le software recovery data iOS a software yokufunda-kuphela ngokupheleleyo. Oku kuthi, aguqule okanye ukuvuza nayiphi na idatha kwidivaysi yakho okanye kwi ifayile elilalela. Sithatha data yakho yobuqu akhawunti nzulu. Wena sihlale njalo umntu kuphela ngubani na ukufikelela kuyo.
Complete iOS soGuquguquko
Zonke iindlela iPad Pro, iPad Air, iPad mini, kunye iPad
wohlobo olukhethiweyo lwefayile
uphawu Safari kaThixo
photos App i-
Amaxwebhu App i-
3 Methods Recovery Data
Ngqo scan ifowuni yakho ukuba ukubuyisa data esusiwe
Caphula iTunes ukhuphelo yakho kwakhona iifayile ezikhethiweyo
Caphula iCloud ukhuphelo yakho kwakhona iifayile ezikhethiweyo
Eliphezulu Izinga ukuchacha kolu shishino.
Guarantee dr.fone kaThixo
Enobuchwepheshe, ekhuselekileyo, nethembekileyo.
Zama simahla iintsuku ezingama-30!
Zama ukuba Free kangangeentsuku ezingama-30!
Qinisekisa data kwiinkcukacha phambi recovery
Ukubuyisa yonke idatha, okanye ukhethe iifayile
data ekhoyo iza kuba ngaphezulu
Nguwe kuphela ukungena kwi-akhawunti yakho
3 ezilula: qhagamshela, scan kwakhona
day 30 free trial
Zonke iifoto zisuswe zifumaneka. Uthathe malunga nemizuzu engama-30. Ufakelo inkqubo ayincedi kuthatha ixesha elininzi. Ukuba uyazi IsiNgesi, ngoko yonke into ihamba ngokukhawuleza kakhulu. Ndiza kusebenzisa inkqubo kwiimeko ezingxamisekileyo. Ithemba recovery ngempumelelo ezibalulekileyo kum iifoto.
Enkosi uncedo. Ungandinceda ukuba ndi kwakhona iifoto zam isusiwe. Le program kuhle kakhulu. I ingcebiso wonke ukusebenzisa le nkqubo xa ucima ulwazi oludingekayo
inkqubo elungileyo. Inceda abantu ukuba kwakhona iifayile isusiwe. Ngenxa yiko. I sincoma usebenzisa abantu abaninzi abafuna ngenene ukubuyisela apps. Musa ukoyika ukufaka le program. Kuba kuya kukunceda ukuba uthole izimvo zakho isusiwe
3 Iindlela Buyisa imiyalezo ecinyiweyo Text on iPhone
Indlela Buyisa Data ukusuka eziwayo iPhone Broken
Indlela Buyisa Call History on iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Okufakwe)
Indlela Buyisa iifoto esusiwe ukusuka iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Okufakwe)
Indlela Buyisa iPhone Lost Data emva Ukubuyisela Izilungiselelo Factory
Indlela Buyisa Ividiyo esusiwe on iPhone 7 (Plus) / 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5c / 5 / 4s / 4
Indlela Buyisa WhatsApp Imiyalezo on iPhone 7/6/6/5 / 5c / 5/4/4 / 3GS
Indlela Buyisa Abezonxibelelwano esusiwe iPhone Ngaphandle Eyogcino
Indlela Buyisa imessages ukusuka iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Okufakwe)
Abaxhasi bethu nabo Ilayisha:
Lungisa nemiba inkqubo eyahlukeneyo iOS ezifana mode alulame, emhlophe Apple logo, abamnyama screen, sisaqhubeka phezu ekuqaleni, njl
Backup abuyisele nayiphi na into kwi / ukuya kwisixhobo, kwaye kumazwe oko ufuna ukusuka ukhuphelo kwikhompyutha yakho.
Dlulisela iOS Whatsapp iPhone / iPad / iPod touch / izixhobo Android, okanye backup / kwiikhompyutha thumela kuyo.